आईपिएलमा नबिकेर के भयो त सन्दीपले इंग्ल्यान्डको टि-२० ब्ला’स्ट खेल्ने !
काठमाडौं : नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डको घरेलु ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता ‘भि’टालिटी ब्ला’स्ट’ खेल्ने भएका छन्।
वोर्सेस्ट’रशायर र्यापिड्सले २० वर्षीय सन्दीपलाई २०२१ को सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको हो । रापिड्सले आफ्नो वेवसा’इटमा यसबारे समाचार पोष्ट गर्दै पु’ष्टि गरेको छ ।
विश्वभर टी-२० फ्रे’न्चाइज टुर्ना’मेन्ट खेल्दै अनुभव बटुलेका सन्दीपले खेल्ने लागेको यो नयाँ टुर्नामेन्ट हो । सन्दीपलाई रिकी वेस्से’ल्सले वर्से’स्चसाएरमा ल्याउन भूमिका खेलेको क्लबले जनाएको छ ।
पाकिस्तान सुपर लिगमा सन्दीप र वेस्से’ल्सले सँगै खेलेका थिए । सन्दीपसँगै अष्ट्रे’लियन खेलाडी बेन ड्वा’र्सहुइस रापिड्सको विदेशी खेलाडीको रुपमा क्लबले जनाएको छ ।
उनीहरु टुर्ना’मेन्ट समूह च’रणको पूरै खेलमा टिमको लागस अभाइलेबल हुनेछन् । रापिड्सका मुख्य प्रशिक्षक ए’लेक्स गिडमनले सन्दीपको अ’नुबन्धबाट खुशी भएका छन् । ‘सन्दीपले धेरै टु’र्नामेन्ट खेलेका छन् र फ्रेन्चा’इज क्रिकेटमा धेरै अनुभव लिएका छन् ।
गिडमनले भने, ‘उनी लेगस्पीनर हुन्। हामीले टिममा सन्तुलनका लागि उनलाई अनुबन्ध गरेका हौँ । उनको अनुबन्धबाट हामी खुशी छौँ ।’सन्दीपले बिग ब्यास लिग, इन्डियन प्रिमियर लिग, पाकिस्तान सुपर लिग , क्वारेवियन
प्रिमियर लिग, टि२० क्यानडा, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग,
लगातका विश्व चर्चित टि२० फ्रेन्चाइज लिग खेली सकेका छन् । २०२१ को आइपिएलमा भने सन्दीपलाई कुनैपनि टोलीले अक्सनमा खरिद गरेका थिएनन् । इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्डले आयोजना गर्ने ‘भिटालिटी ब्लास्ट’ २०२१ को ९ जुनदेखि १८ सेप्टेम्बरसम्म हुनेछ। -ताजा खबर टिभी
२०७७ चैत्र १४, शनिबार ०१:४९ गते 1 Minute 819 Views
९. खुल्यो मलेसिया रोजगार – न्युनतम तलब समेत तोकियो ।